OEM ee Wadajirka Caafimaadka Glucosamine, Chondroitin Sulfate & Msm Softgel Capsule
[Faahfaahinta Baakadka] Xirxirida Jumlada: kartoonka xirxirida dukaamada: Dhalada, Baalalka, Sanduuqa, iwm. Ama sida macaamiisha looga baahan yahay
[Kaydinta] Ku kaydi meel maalin ah oo ka fogow dhammaan kuleylka xad-dhaafka ah.
[Nolosha shelf] 36 bilood
Chondroitin sulfate waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro daaweynta xanuunka neuropathic, madax xanuunka dhanjafka, kalagoysyada xanuunka, cudurada wadnaha, iyo hyperlipidemia. Chondroitin sulfate A sidoo kale wuxuu leeyahay daawada xinjirowga lidka ku ah iyo antithrombotic, waxaana loo isticmaali karaa cudurrada atherosclerotic ee wadnaha, xinjirowga dhiigga iyo heerarka kolestaroolka, atherosclerosis, angina pectoris, infarction myocardial, iwm.
Glucosamine waxay leedahay saameyn daaweyn ah oo lagu daweeyo rheumatoid arthritis, cudurada wadnaha, oof-wareenka iyo jabka. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa la ogaaday inay soo nuugi karto xagjirnimo lacag la’aan ah, daahin kara gabowga, yareyn karto miisaanka, nidaamineyso endocrine iyo shaqooyin kala duwan oo nafsaani ah.